အဆိုတော်ကြီး လွှမ်းမိုး ရဲ့ သီချင်းကို ဗားရှင်းပြောင်းပြီး သီဆိုခဲ့လို့ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Project K အဖွဲ့ – GuGuGarGar
အဆိုတော်ကြီး လွှမ်းမိုး ရဲ့ သီချင်းကို ဗားရှင်းပြောင်းပြီး သီဆိုခဲ့လို့ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Project K အဖွဲ့
Shwe | February 4, 2020 | Cele | No Comments
ယောက်ကျားလေး အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Project K အဖွဲ့ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြား တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားလို နိုင်ငံတွေမှာလည်း ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဆုတွေရရှိခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်…. သီချင်းဆိုရာမှာ အကလေးတွေ နဲ့ ဖျော်ဖြေ သီဆိုတာကြောင့် မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေကလည်း Project K အဖွဲ့ကို နှစ်သက်အားပေးကြပြီး အထူးသဖြင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေက ပိုမိုအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်….
ပီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ City FM ရဲ့ (၁၈)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နဲ့ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ Project K အဖွဲ့ဟာ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် အဆိုတော်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လွှမ်းမိုးကိုယ်တိုင်ရေးထားပြီး ကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့ “ရန်ကုန်သားလေးကျွန်တော်” သီချင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်…သီချင်း ကို ဆန်းသစ်ထားပြီး မြူးကြွတဲ့ စတိုင်…ပျော်စရာ အကလေးတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ……
Project K အနေနဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော် လွှမ်းမိုးရဲ့ သီချင်းကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပေမယ့်လည်း မူလသီချင်းအရသာ ပျက်တယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်…..
ယခု သီဆိုဖျော်ဖြေတဲ့ ပုံစံက မူလသီချင်းကို အနည်းငယ် ဆန်းသစ်ထားပြီး တေးသရုပ်ဖော် အကလေးတွေနဲ့ ဆိုခဲ့တာကြောင့် အရင်ပုံစံကို သဘောကျတဲ့သူတွေရဲ့ မနှစ်ခြိုက်ဝေဖန်မှုတွေ ခုလိုရှိလာခဲ့တာပါ…တချို့ကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ ဆန်းသစ်မှုကို သဘောကျတယ်လို့ ချီးမွမ်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာကို မှတ်ချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်…..
Project K သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးလွှမ်းမိုး ရဲ့ “ရန်ကုန်သားလေးကျွန်တော်” သီချင်းဗီဒီယိုလေးကိုလည်း အောက်မှာပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး မိမိတို့အမြင်ကို ရေးသားခဲ့နိုင်ပါတယ်နော်.. ရုပ်သံဖိုင်အားကြည့်ရန် Video Source : Myanmar Idol Season 4
ယောကျကြားလေး အဆိုတျောအဖှဲ့ဖွဈတဲ့ Project K အဖှဲ့ ဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာ အောငျမွငျကြျောကွား တဲ့ အဖှဲ့ဖွဈပွီး ကိုရီးယားလို နိုငျငံတှမှောလညျး ပွိုငျပှဲတှေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရငျး ဆုတှရေရှိခဲ့တဲ့ အဖှဲ့ပဲဖွဈပါတယျ…. သီခငျြးဆိုရာမှာ အကလေးတှေ နဲ့ ဖြျောဖွေ သီဆိုတာကွောငျ့ မွနျမာပွညျက ပရိသတျတှကေလညျး Project K အဖှဲ့ကို နှဈသကျအားပေးကွပွီး အထူးသဖွငျ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှကေ ပိုမိုအားပေးကွတာဖွဈပါတယျ….
ပီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျနကေ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ City FM ရဲ့ (၁၈)နှဈပွညျ့ နှဈပတျလညျနဲ့ ဆုပေးပှဲအခမျးအနားမှာ Project K အဖှဲ့ဟာ တဈခြိနျက နာမညျကြျော အဆိုတျောကွီးတဈဦးဖွဈတဲ့ လှမျးမိုးကိုယျတိုငျရေးထားပွီး ကိုယျတိုငျဆိုထားတဲ့ “ရနျကုနျသားလေးကြှနျတျော” သီခငျြးနဲ့ ဖြျောဖွခေဲ့ပါတယျ…သီခငျြး ကို ဆနျးသဈထားပွီး မွူးကွှတဲ့ စတိုငျ…ပြျောစရာ အကလေးတှနေဲ့ ဖြျောဖွခေဲ့တာပါ……
Project K အနနေဲ့ နာမညျကွီး အဆိုတျော လှမျးမိုးရဲ့ သီခငျြးကို ပုံစံတဈမြိုးနဲ့ သီဆိုဖြျောဖွခေဲ့ပမေယျ့လညျး မူလသီခငျြးအရသာ ပကျြတယျဆိုပွီး ဝဖေနျမှုတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ….. ယခု သီဆိုဖြျောဖွတေဲ့ ပုံစံက မူလသီခငျြးကို အနညျးငယျ ဆနျးသဈထားပွီး တေးသရုပျဖျော အကလေးတှနေဲ့ ဆိုခဲ့တာကွောငျ့ အရငျပုံစံကို သဘောကတြဲ့သူတှရေဲ့ မနှဈခွိုကျဝဖေနျမှုတှေ ခုလိုရှိလာခဲ့တာပါ…တခြို့ကတော့ လူငယျတှရေဲ့ ဆနျးသဈမှုကို သဘောကတြယျလို့ ခြီးမှမျးမှုတှလေညျးရှိခဲ့တာကို မှတျခကျြတှမှောတှရေ့ပါတယျ…..
Project K သီဆိုဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ ဦးလှမျးမိုး ရဲ့ “ရနျကုနျသားလေးကြှနျတျော” သီခငျြးဗီဒီယိုလေးကိုလညျး အောကျမှာပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ…ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဗီဒီယိုလေးကွညျ့ပွီး မိမိတို့အမွငျကို ရေးသားခဲ့နိုငျပါတယျနျော..
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ သက်မွန်မြင့်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားဗိုလ်ကြီးကား ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ခေတ်ပညာတတ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အပြောပက်စက်လွန်းလို့ ဒဲ့ဝေဖန်လိုက် တဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ
ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ် ချမှတ်ခံရတဲ့ တေးသံရှင် အစ္စဏီ အတွက် အသနားခံစာတင်သွင်းသွားကြမယ့် ဂီတအနုပညာရှင်များ